साप्ताहिक राशिफल (असोज ०८-१४, २०७४) राशिफल – Complete Nepali News Portal
साप्ताहिक राशिफल (असोज ०८-१४, २०७४) राशिफल
September 26, 2017	674 Views
०८ गते : शारदीय नवरात्र (बडादशैं) अन्तर्गत कुष्माण्डा भगवतीको पूजा
०९ गते : शारदीय नवरात्र (बडादशैं) अन्तर्गत स्कन्दमाता भगवतीको पूजा, उपाङ्ग ललिता व्रत, भैरव यात्रा (पचली), मूहुर्त : अन्नप्राशन(पास्नी), रुद्राभिषेक(रुद्रीपूजा), अग्निवास(होमादि), द्रव्यप्रयोग वा लगानी, घर छाउने/ढलान गर्ने, डेरा सर्ने, पुराणश्रवण, दीक्षाग्रहण, कलशचक्र
१० गते : शारदीय नवरात्र (बडादशैं) अन्तर्गत कात्यायनी भगवतीको पूजा, विल्व निमन्त्रण, मूहुर्त : रुद्राभिषेक(रुद्रीपूजा), कलशचक्र
११ गते : शारदीय नवरात्र (बडादशैं) अन्तर्गत कालरात्री भगवतीको पूजा, फूलपाती, सरस्वत्याह्वान, नवपत्रिका प्रवेश, विश्व पर्यटन दिवस, मूहुर्त : रुद्राभिषेक(रुद्रीपूजा), अग्निवास(होमादि), कलशचक्र
१२ गते : शारदीय नवरात्र (बडादशैं) अन्तर्गत महागौरी भगवतीको पूजा, महाष्टमी व्रत, अष्टमी व्रत, गोरखकाली पूजा, कालरात्री, कुलक्षिभ्वय (नेवारी पर्व), मूहुर्त : पुराणश्रवण, दीक्षाग्रहण, कलशचक्र
१३ गते : शारदीय नवरात्र (बडादशैं) अन्तर्गत सिद्धिदात्री भगवतीको पूजा, महानवमी, मन्वादि, स्याक्वट्याक्व (नेवारी पर्व), मूहुर्त : रुद्राभिषेक(रुद्रीपूजा), अग्निवास(होमादि), कलशचक्र
१४ गते : दशैंको टीका, विजया दशमी, शारदीय नवरात्र (बडादशैं) अन्तर्गत अपराजिता भगवतीको पूजा, खड्गयात्रा, देवी विसर्जन, शमी दर्शन र पूजा, बौद्धावतार, चाँल (नेवारी पर्व), मूहुर्त : घर छाउने/ढलान गर्ने, कलशचक्र
(वि.सं. २०७४ आश्विन ०८ गतेदेखि वि.सं. २०७४ आश्विन १४ गतेसम्म)
सप्तम भावको चन्द्रमाका साथमा साताको प्रारम्भ भएकाले सुरुमा मनोरञ्जक समय रहने छ । स्वास्थ्यस्थितिमा अनुकूलता आउनेछ । घुमघाम र भेटघाटमा समय बित्नेछ । कतै मेजमानीको अनुकूलता समेत प्राप्त हुनसक्छ, दाम्पत्यसम्बन्ध सुखद रहनेछ । परोपकारकारका क्षेत्रमा मन आकर्षित हुनेछ । सोमबारपछि २ दिन अनुकूल नहुन सक्छ । सवारीमा सावधानी अपनाउनु पर्छ । स्वास्थ्यमा विकार देखिन सक्छ । झञ्झट र समस्याबाट मुक्त भएर बस्न कठिन हुनेछ । सामाजिक र परोपकारका मार्गमा अवरोध हुनेछ । बुधबारपछि भाग्यमा प्रवेश गर्ने चन्द्रमाल धार्मिकस्थल, देवालय वा पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमण गराउन सक्छ । सामाजिक कामबाट प्रशंसा प्राप्त हुनेछ । पुराना कुरा र यादमा कुनै समय यापन हुन सक्छ । हाकिम वा विशिष्ट व्यक्तिको विचारले प्रभावित तुल्याउन सक्छ । जग्गाजमिनको कारोबार गर्दा असल हुनेछ । सामाजिक क्षेत्र र नोकरीबाट मानसम्मान मिल्नेछ । सन्तान पक्षबाट पनि राम्रै सहयोग प्राप्त हुनेछ ।
साताको मध्यभागमा शुभ फल प्राप्त हुनेछ, तर सुरुमा काममा बाधाअडचन उत्पन्न हुने लक्षण छ । आर्थिक समस्याले सङ्कट उत्पन्न हुनसक्छ । शारीरिक प्रतिस्पर्धा र तर्क, विवाद वा न्याय सम्पादनका सिलसिलामा फाइदा लिन सकिंदैन । तर सोमबारपछि मानप्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादामा अभिवृद्धि हुनेछ । घरायसी काममा समय र धन खर्च हुनेछ । पारिवारिक जीवनमा रमाइलोपना आउने छ । दाम्पत्य जीवनमा सुमधुरता छाउने छ । तर बुधबारपछि अष्टमस्थ चन्द्रमाका कारण चोटपटकको भय हुनेछ । झुठो फत्तुर आइलाग्न सक्छ । बोलीको प्रतिकूल एवं विपरीत अर्थ लाग्ने हुँदा सचेतता एवं संयमता अपनाउनु राम्रो हुन्छ । पछाडि कुरा काट्नेहरूले षड्यन्त्रको तानाबुना रच्ने प्रयास गर्नेछन् । यद्यपि साताको अन्त्य सकारात्मक नै रहने छ । पुराना साथीभाइसित अचानक भेटघाट हुने र आकस्मिक लाभ मिल्ने समय छ । कर्मसिद्धिको समय छ । सामूहिक नेतृत्व सम्हाल्ने मौका मिल्नेछ । व्यापारमा लाभ हुनेछ ।
बौद्धिक क्षमताको उपयोग गर्ने साता छ । चिन्तनमनन र पठनपाठनप्रति ध्यान केन्द्रित हुनु राम्रो हो । मानप्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादामा अभिवृद्धि हुनेछ । अभिभावक र साथीभाइले उपयोगी र आवश्यक सहयोग प्रदान गर्नेछन् । छोराछोरीबाट सन्तोष प्राप्त हुनेछ । इष्टमित्रले प्रशंसा गर्नेछन् । सोमबारपछि केही नकारात्मकता देखिन सक्छन् । बन्दव्यापार र साझेदारीबाट फाइदा हुनेछैन । आर्थिक समस्याले सङ्कट उत्पन्न हुनसक्छ । अध्ययन, अध्यापन र लेखनको कार्यमा खासै तत्परता देखिँदैन । तर बुधबारपछि रसरङ्गमा समय बित्नेछ । मेवामिष्ठान्न खान पाइने र मनोरञ्जनमा रमाउन पाउनु हुनेछ । आत्मविश्वास र शीघ्र निर्णय गर्ने क्षमता अभिवृद्धि हुनेछ । विपरीतलिङ्गी सहयात्रीबाट प्राप्त सल्लाहबाट गरिएको कामबाट फाइदा हुनेछ । यद्यपि यस अवधिमा लापरवाही गर्नु हुँदैन, व्यापारीहरूले हानी व्यहोर्नु पर्छ र कर्मचारीले अपजस व्यहोर्नु पर्छ । छात्रछात्रा रमाइलोमा भुलिने छन् । अकारण वादविवादमा फँस्ने र प्रतिफल प्राप्त नहुने क्षेत्रमा लगानी हुनेछ ।
आइतबार केही घरायसी समस्याले सताउने भए पनि समग्रमा साता फलदायी नै रहने छ । प्रारम्भमा झैझगडाबाट टाढा बस्ने समय हो । खासगरी हाकिम, मातापिता वा विशिष्ट व्यक्तिसँग मनमुटाव हुनसक्छ । प्रेमसम्बन्धमा विश्वासको वातावरण नभएको महसुस हुनेछ । शरीरमा आलस्यपना देखिने छ, चोटपटक पनि लाग्न सक्छ । तर सोमबारपछि विगतमा गरेको परिश्रमको प्रतिफल प्राप्त हुनेछ, रोकिएका काम बन्ने योग छ । पठनपाठनमा प्रगति हुनेछ । सभासमारोहमा सहभागी बन्ने मौका छ । आम्दानीका मार्गहरू खुल्ला रहनेछन् । चिन्तन महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ । बुधबारपछि पेसागत र व्यवसायिक स्थितिमा सामान्य समस्या देखिए साताको अन्त्यमा जीवनसाथी वा विपरीतलिंगी मित्रसँग मन फुकाएर आफ्ना कुरा राख्नका लागि राम्रो छ । घरमा माङ्गलिक कृत्य सम्पादन गर्ने समयसमेत छ । तर अध्ययन, अध्यापन र लेखनमा खास अभिरुचि हुनेछैन । कतै लामो दूरीको रमणीय यात्राको सम्भावना पनि देखिन्छ ।
पराक्रम र उत्साहबृद्धिका लागि अनुकूल समय छ । साताको प्रारम्भमा नजिकका मित्रबाट विशेष सहयोग र सुख प्राप्त हुने देखिन्छ । भाइबहिनीका तर्फबाट खुसीको खबर प्राप्त हुने सम्भावना छ । भोजभतेर, खानपिन जस्ता कार्यमा सहभागी हुनु पर्नेछ । सानातिना कुरामा अल्मलिने समय छैन । सोमबारपछि केही समय मानसिक र आर्थिक सङ्कटले सताउने परिस्थिति रहने छ । खासगरी आफ्नै जिद्दीपनाले गर्दा काम बिग्रने र छरछिमेकमा असमझदारी बढ्ने देखिन्छ । तर बुधबारपछि बौद्धिक तथा प्राज्ञिक गतिविधिमा संलग्न हुने समय छ । आफन्तबाट सहयोग र हौसला प्राप्त हुने छ । प्राप्त गरेको ज्ञान अरुलाई बाँड्ने बेला हो । व्यवसायिक क्षेत्रबाट राम्रो लाभ प्राप्त हुनेछ । छोराछोरीबाट सन्तोष हुनेछ । अध्ययन, अध्यापन र लेखनको कार्यमा रुचि बढ्ने छ । मनमा प्रसन्नता र उमङ्ग देखिन्छ । तर साताको अन्त्यमा पाचन प्रणालीमा विकार आउन सक्छ, सचेत हुनुपर्छ ।
साताभरि खानपान र रामरमाइलोमा समय बित्नेछ । सँगीसाथी र इष्टमित्रको साथसहयोग प्राप्त हुनेछ । भोजभतेर र रमझममा सहभागी भइने छ । यस अवधिमा आर्थिक लगानी बढाउन अनुकूल छ । नयाँ ठाउँमा निवेश र लगानीको वातावरण बन्नेछ । धेरैथोर लगानी गर्नु पर्नेछ । बोलीको प्रभाव बढ्नेछ, आफन्तले प्रशंसा गर्नेछन् । विद्वान् र प्राज्ञिक व्यक्तिहरूबाट सम्मान र प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ । विदेश वा दूरदराजमा बसेका व्यक्तिहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ । धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन मन लाग्नेछ । तर साताको सामान्य कुराले पनि मन पिरोल्नेछ । मानसिक अशान्ति र बेचैनी हुने योग छ । पढाइलेखाइमा जाँगर चल्दैन । विश्वास गरेका व्यक्तिउपर नै शङ्का उत्पन्न हुनसक्छ । विवाद र झैझगडाबाट टाढा रहनु जाति हुन्छ, यद्यपि उक्त समयमा पनि छोराछोरीबाट सन्तोष प्राप्त हुनेछ । दाजुभाइको प्रगतिको समाचार सुन्न पाइएला । साथीहरूसित मनोरञ्जन गर्ने अवसर जुर्नेछ ।
नयाँ कामको लागि नयाँ अवसर आउनेछ । निर्माण तथा व्यवहारिक क्षेत्रमा मन आकर्षित हुनेछ । शुभ समाचार प्राप्त हुने योग छ । मन फुरुङ्ग हुने समय छ । दैनिक कामकाज सजिलै सम्पन्न हुनेछन् । घरपरिवारमा राम्रो छ । सामाजिक र व्यक्तिगत प्रतिष्ठा स्थापना गर्ने मौका छ । पढाइलेखाइको क्षेत्रमा प्रगति हुनेछ । विशिष्ट व्यक्तित्वसँग भेटघाट हुनेछ । पारिवारिक जमघटमा मन रमाउनेछ । वस्त्र, अलङ्कार आदि खरिद गर्ने योग छ । भाइबहिनीका तर्फबाट खुसीको खबर प्राप्त हुने सम्भावना छ । धार्मिक र सामाजिक काममा समय बित्नेछ । दिनदुःखीलाई दिएको सहयोगले रोकिएको काम बन्न सक्छ । पशुपालक र दुग्धव्यवसायमा संलग्नहरूले लाभ प्राप्त गर्नेछन् । तर साताको अन्त्यमा परिवारजनमा असमझदारी बढ्नेछ, मान्यजन वा अभिभावकवर्ग रुष्ट हुनसक्छन् । जग्गाजमिन वा घरायसी सम्पत्तिको चिन्ताले सताउन सक्छ । महत्वाकाङ्क्षी योजनामा हात हाल्नु राम्रो हुँदैन । कृषि–चौपायाबाट हानि पुग्नसक्छ ।
आर्थिक पक्षमा सन्तुलनको प्रयास गरी अघि बढेमा सातालाई अनुकूल बनाउन सकिने छ । प्रारम्भमा यात्राको योग छ, तर खर्च बढ्ने र धनमाल हराउने सम्भावना पनि देखिन्छ । खानपान र आहारविहारमा ध्यान पुर्याउन नसक्दा स्वास्थ्य खराब हुनसक्छ । काममा बाधा हुनाले र धनको अभावमा मनमा अशान्ति व्याप्त हुने छ । तर सोमबारपछि राम्रो हुनेछ, व्यापारिक वा दैनिक कामहरू सन्तोषजनक ढंगले सम्पन्न हुनेछन् । खानपिनका परिकार प्राप्त हुने र भ्रमण, पर्यटन, रमझम तथा सामाजिक काममा सहभागी हुनु पर्नेछ । धार्मिक र सामाजिक काममा मन जान सक्छ । धार्मिक सामाजिक कामको दायित्व थपिन सक्छ । भाँडाकुँडा, घरायसी बन्दोबस्तका सामान र सुनचाँदी जस्ता धातुको कारोवारबाट धेरथोर लाभ मिल्नेछ । बोलीमा पूर्ण प्रभाव रहने छ । सामाजिक कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका वहन गर्नु पर्नेछ, जसबाट यश प्राप्त हुनेछ । समग्रमा यो समय विशेष महत्वको समय हुनेछ ।
आत्मविश्वास र पराक्रममा वृद्धि हुने समय छ । मन एकचित्त बनाएर लक्ष्य प्राप्ति गर्ने तर्फ लागिरहनु पर्ने देखिन्छ । धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रतर्फको काममा सहभागी बन्नु पर्ला । नोकरी गर्नेले मानसम्मान पाउने छन् । तर सोमबारपछि लामो दूरीको यात्रामा गडबडी आउन सक्छ । शरीरमा पीडा हुनेछ । घाउचोट तथा अन्य वस्तुले समेत दुःख दिनसक्छ । अप्रिय समाचार सुन्नु पर्दा मन खिन्न हुने स्थिति आउनसक्छ । परिवारबाट असहयोग हुनेछ । तर साताको अन्त्य अनुकूल नै रहने छ । अन्न फलफूल आदि कृषिजन्य व्यवसायबाट राम्रो आर्थिक उपार्जन हुनेछ । नोकरी र बन्दव्यापारबाट सन्तुष्टि मिल्नेछ । उपहार पुरस्कार आदि मिल्नेछ । नयाँ काम गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने अनुकूल छ । नयाँ काममा हात हाल्ने समय छ । धन लगानी गर्ने अवसर पाउनुहुने र आकस्मिक निर्णयले दीर्घकालसम्म फाइदा हुने काम बन्ने सङ्केत छ ।
साताको प्रारम्भमा स्वास्थ्यस्थिति राम्रो रहनुका साथै काम गर्ने जाँगर बढ्ने छ । पारिवारिक सुखसम्मृद्धिमा बृद्धि हुनेछ । काममा सोचेजस्तै सफलता मिल्नुका साथै उन्नति गर्ने अवसर प्राप्त हुने योग छ । नवीन रोजगारीको सम्भावना छ । सामाजिक कामबाट प्रशंसा प्राप्त हुनेछ । धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सभासमारोहमा सरिक हुने सम्भावना छ । लाभदायक यात्राको सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन । राज्यपक्षबाट हुनुपर्ने काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । तर बुधबारपछि बाह्रौं भावमा चन्द्रमा रहनाले आर्थिक पक्षमा असन्तुलन हुने सम्भावना छ । विश्वास गरेका व्यक्तिबाट नै खोजेको सहयोग प्राप्त हुँदैन । अशान्ति र अराजकताका समाचार सुन्नु पर्ने हुनसक्छ । पारिवारिक समस्याले मन खिन्न हुनेछ । दीर्घकालीन लगानीले पिरोल्न सक्छ । यद्यपि अन्त्यमा आत्मनिर्णयको क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । सन्तति र भाइबहिनीका पक्षबाट सन्तोष मिल्नेछ । भौतिक साधनको जोहो हुनाका साथै मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा सक्रिय हुने अवसर जुट्ने छ ।
दान पुण्यका कार्यतर्फ मन आकर्षित बन्नेछ । कुनै पर्यटकीय स्थल, तीर्थ वा मन्दिरको भ्रमण हुनसक्छ । सोमबारपछि साथीभाइसित भेटघाट हुने योग छ । समाजको नेतृत्व बहन गर्नुपर्ने छ । खाद्यान्नका परिकार तथा मेवामिष्ठान्न मिल्ने समय छ । जग्गाजमिनको कारोबार गर्दा असल हुनेछ । सामाजिक क्षेत्र र नोकरीबाट मानसम्मान मिल्नेछ । बुधबारपछि धर्मकर्ममा रुचि बढ्ने योग छ । मिष्ठान्न भोजन प्राप्त हुनेछ । पठनपाठनमा प्रगति हुनेछ । अरुबाट तपार्इंका कामको उच्च मूल्याङ्कन हुने सङ्केत छ । बोलीको कदर हुनेछ । प्रशंसा, बढुवा वा जिम्मेवारी मिल्ने देखिन्छ । साताको अन्त्यमा पारिवारिक वातावरण अनुकूल हुने छैन । मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता कमी आउने छ । नजिकैका व्यक्तिबाट अपमान वा अपजस सहनु पर्ने हुनसक्छ । आर्थिक लगानी गर्नु भर पर्दो देखिन्न । सामान हराउने सम्भावना पनि छ ।
साताको प्रारम्भमा मनमा अशान्ति र छटपटी व्याप्त हुने समय छ । घरायसी वातावरण, दाम्पत्य र प्रणयसम्बन्धमा असहजता आउनसक्छ । कसैसँग व्यर्थमा वादविवाद हुनसक्छ । महत्वपूर्ण काम गर्न बाँकी भए केही दिनका लागि नगर्नु राम्रो हुनेछ । तर सोमबारपछि अनुकूलता प्राप्त हुनेछ । त्यसपछि प्रेम र भाइचारा जीवन्त तुल्याउने विशिष्ट समय हो । आत्मबल बढ्ने छ । मातापिता, अभिभावक र मान्यजनको आशीर्वचन प्राप्त हुनेछ । विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग र सल्लाह प्राप्त हुनेछ अनि कुनै महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुनेछ । हाकिम, मातापिता वा विशिष्ट व्यक्तिको विचारले प्रभावित तुल्याउन सक्छ । समाजसेवाका कामबाट लाभ हुनेछ । सुखसुविधा र विलासिताका साथमा समय बित्नेछ । सरकार र राज्यपक्षबाट लाभ प्राप्त हुनेछ । । पितृधनबाट फाइदा उठाउन सकिनेछ, प्रशस्त आम्दानी हुने सङ्केत पनि छ, तर आम्दानी गरिएको भोगविलास र आनन्दका क्षेत्रमा धन नाश हुने सम्भावनासमेत छ ।